Macluumad Ku Saabsan Atirishada Deepika Padukone Oo Shalay U Dabaal Dageysay Sanad Guuradeda 33-aad!! – Filimside.net
Macluumad Ku Saabsan Atirishada Deepika Padukone Oo Shalay U Dabaal Dageysay Sanad Guuradeda 33-aad!!
Xidigta weyn ee maqaamka sare manta Bollywoodka ka gaartay waxay dunida kusoo biirtay shalay oo kale 5 jan 1986 xidigtaan ma aha shaqsi nolosha caadiga ah Balwad kuleh sida inee sigaar cabto ookale balse waa shaqsi markii aflaamta ay sameyneeso cabto sigaarka waana mid markaas muuqaalkas looga doonaayo oo kaliya.
Xidigtaan waxay fanka kusoo biirtay sanadkii 2007 filimkaaso ay Director ka aheyd Farah Khan sido kalena uu hogaamiye ka ahaa SRK.
Balse taas kahor waxay Farah khan la saxiixatay filimka Happy New Year kaaso la daawaday sanadkii 2014 oo uuna hogaamiye ka ahaa SRK Deepikana atariisho ka aheyd.
Balse filimkaan Happ New Year waxay Deepika Saxiixatay sanadkii 2007 wuxuuna ahaan lahaa filimkeedii koowaad ee ay Bollywoodka kusoo gasho balse ma dhicin midaa oo filimkaas dib ayaa loo dhigay sidaa ayeena Deepika Om Shanti Om ugu soo caan baxday.
Wuxuu Om Shanti Om noqday Blockbuster weyn Deepikana xidig weyn aye kunoqotay filimkaan, sido kale waxaa kamid ah arimaha ugaarka ah xidigtaan inee sanadkii 2016 noqotay atariishada ugu mushaarka badana guud ahaan atariishiyinka Bollywoodka ka xamaashata maadama filimkeedii Bajirao Mastani noqday Hit weyn.
Dhanka kale waxyaabaha ay xiiseso xidigtaan waxaa kamid ah cunada ay cunaan koonfurta India aye aad u jeceshahay xidigtaan sido kalena dharka Fashionka iyo Modelka ahna waxay ka jeceshahay dharka ay Hindida xirtaan ee Saari da looyaqaan.
Aqrinta buugaagta waa waxyaabaha ugu weyn eesan ka maarmin xidigtaan xataa hadee gurugeeda aysan joogin oo ay wadamo kale aflaam duubis u aado.
Dunidan weyn Deepika waxay ka jeclaatay oo ay marwalbana jeceshahay inee dalxiis u aado Dalka Franch sido kale xidigaha ay caalamaka ka taagerto waxaa kamid ah, Shah Rukh khan, Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Brad Pitt iyo waliba Richard Gere.
Dhanka xidigaha atariishoyinka ah ee ay Deepika Taagerada rasmiga u tahaya waxaa kamid ah, Hema malini, Kajol, Madhuri Dixit, Rani Mukherji, Sridevi iyo waliba Preity Zinta.
Ugu dambeyn xidigtaan aflaamta caalamiga ah oo ay jeceshahay waxaa kamid ah, Dilwale Dulhania Le Jaayenge, The Color of Paradise iyo Cinderella Man.